Ahoana ny fampiantranoana ny sarimihetsika Halloween tonga lafatra amin'ny 2020
Hamarino tsara fa manana ireto zavatra mahavariana mampivadi-po ireto amin'ny alin'ny sarimihetsika Halloween, feno boos sy toerana mahafinaritra ny sabotsy amin'ity taona ity, izay mamela fotoana be dia be hanaovana hetsika matoatoa. Na dia mety tsy mitovy aza ny fomba fikafika na fitsaboana ary mety miankina amin'ny toerana onenanao aza, tsy midika izany hoe afaka ...
Fepetra takiana sy toetra mampiavaka ny barika plastika
Ny akora amin'ny barika plastika dia vita amin'ny polyethylene, polyester ary plastika maro hafa, ary ampiasaina amin'ny fitazomana asidra acetic glacial, peroxide peroxyde tert, solika mampidi-doza amin'ny solika, zava-mahadomelina asidra sy alkaly, sns. Manana toetra miavaka izy io, toy ny tsy marefo, tsy harafesina, ...
Function sy toetra mampiavaka ny siny plastika
Ny barika plastika dia vita amin'ny polyethylene, polypropylene ary plastika hafa (firafitra: résin synthetic, plastika, stabilizer, pigment) amin'ny famolavolana sy ny famolavolana. Izy ireo koa dia ampiasaina amin'ny famonosana ivelany ny lahatsoratra misy ranoka sy matevina amin'ny indostria maro toy ny simika ...
Inona no tokony hojerentsika rehefa mampiasa barika fampidirana plastika
Rehefa ampiasaina dia azo fantarina amin'ny fomba manaraka: fomba afo. Raha ampitahaina amin'ny barika plastika PE dia somary tsara kokoa ny fanoherana ny hafanana amin'ny barika plastika PP, fa na firy aza ny mari-pana dia misy ny loza atahorana sy malefaka, noho izany ny hafanana ambony dia tokony hialana amin'ny f ...